यौन सम्पर्क गर्दा महिलाहरुले किन आवाज निकाल्छन् ? यस्तो छ डाक्टरको भनाइ ! - Experience Best News from Nepal
यौन सम्पर्क गर्दा महिलाहरुले किन आवाज निकाल्छन् ? यस्तो छ डाक्टरको भनाइ !
आपसमा यौन सम्पर्क गर्दा महिलाले छुट्टै आवाज निकाल्छन् । आवाज त निकाल्छन् तर किन निकाल्छन् त यस्तो आवाज यो सबैका लागि रोचक विषय हुन सक्छ । आखिर अधिकांश महिला किन यस्तो आवाज निकाल्छन् रु के यस्तो आवाज आनन्दको अभिव्यक्ति हो या मनोरञ्जनको चरम अवस्था रु
यसबारेमा केही वैज्ञानिकले आवाज निकाल्नु नाटक मात्र हो भनेका छन् भने केही अनुसन्धानकर्ताहरूले आनन्दको अनुभूति हो भनेका छन् । साथै केहीले सेक्सको समयमा महिला अचेत अवस्थामा पुग्ने भएकाले यस्तो आवाज निकाल्ने जनाएका छन् । तर यसबारे पछिल्लो अनुसन्धानबाट निकालिएको निष्कर्ष भने अलि फरक छ ।
सेक्सको क्रममा यदि तपाइको पार्टनर उफ आह या आउच जस्ता आवज निकाल्छ भन्दैमा तपाइले यो सोच्नु भएन कि, उनले चरम सन्तुष्टि प्राप्त गरिरहेका छन् । किनभने यो देखावटी मात्र पनि हुनसक्छ । सेक्स गर्दा किन आवाज निकाल्छन्
ब्रिटेनका शोधकर्ताहरूको एक सोधमा ‘२५ प्रतिशत महिला सेक्सका क्रममा आवाज निकालेर चरम आनन्द लिएको’ अभिनय गर्ने खुलासा गरेका छन्। अध्ययन अनुसार सेक्स गर्दा महिलाहरू कराउनु भनेको चरम सन्तुष्ट पाउनु हो । शोधका अनुसार महिलाहरू सेक्स गरिरहेको बेला आह उह जस्ता आवाज यसकारण निकाल्छन् कि, जसले पुरुष साथीलाई उत्तेजित गर्न सकोस्। शोधकर्ताले १८ देखि ४८ वर्ष उमेर समूहका ७१ महिलामा यस्तो शोध गरेका थिए।
अधिकांश महिलाहरू सेक्सबाट चरम आनन्द लिन नपाएको उक्त सोधमा उल्लेख छ । ९० प्रतिशत महिलाहरूले आफूहरू चरम आनन्दसम्म नपुगेको बताएका थिए । ८७ प्रतिशत महिलाहरूले चाँहि आफ्नो पार्टनरप्रति प्रेम सम्बन्ध सुमधुर राख्नकै लागि यसरी आवाज निकाल्ने गरेको खुलाए।
शोधकर्ताले यस व्यवहारको पछाडि ‘सेक्स लगायतका कार्यमा पुरुषप्रधान मानसिकता हावी भएको’ निष्कर्ष निकालेका छन् । यसैले नै महिलाहरू आफ्नो सन्तुष्टिका साथ सम्झौता गरेर पनि पुरुष पार्टनरलाई खुसी तुल्याइरहेका हुन्छन्।
महिलामा आर्गज्म अधिकांशः फोर प्लेको क्रममा धेरै देखिने गरिन्छ । यस क्रममा महिलाहरू सेक्सी आवाज निकाल्ने गर्छन् । महिलाहरू यस्तो आवज त्यसवेला निकाल्छन्, जतिबेला पुरुषहरू चरमोत्कर्षमा पुगेका हुन्छन्।
सेक्सका अत्यन्तै भोका , महिलाहरुलाई कसरी चिन्ने ? यो तरिका हेर्नुहोस !
हस्तमैथुन गर्दा स्वास्थ्यलाई कसरी हानी गर्छ ? यस्तो भन्छन् डाक्टरहरु !
सेक्स गर्नुअघि पुरूषले जान्नैपर्ने ४ कुरा, जसले सम्बन्ध दिगो बनाउछ !
महिनावारीमा यौन सम्पर्क राख्नु राम्रो !